गभर्नरले शेयरबजार हेर्ने होइन, बैङ्किङ र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने हो - गभर्नरले शेयरबजार हेर्ने होइन, बैङ्किङ र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने हो
गभर्नरले शेयरबजार हेर्ने होइन, बैङ्किङ र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने हो
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २० आश्विन, 11:31:39 PM
♦ ज्योती दाहाल
संसारभर साधारण तथा अग्राधिकार गरी २ प्रकारका शेयर हुन्छन् । तर, नेपालका शेयर नेताले अग्राधिकार शेयरको परिभाषा र प्रकृति नै परिवर्तन गरिदिएका छन् । शेयर भनिए पनि डिबेञ्चर वा बोण्डमा जस्तै निश्चित लाभ (ब्याज सरह) पहिले नै सुनिश्चित गरिएको हुने भएकाले एक प्रकारको ऋण हो । अग्राधिकार शेयर सञ्चित तथा असञ्चित, विमोच्य तथा अविमोच्य र परिवर्तनीय र अपरिवर्तनीय हुन्छन् । तर, शेयर नेताले भने यसलाई संस्थापकले धारण गरेको शेयरलाई अग्राधिकार भन्दै ‘पूर्वाधिकार’ नामकरण गरेर यसले साधारण शेयरले भन्दा बढी लाभांश पाउँछ भन्ने नयाँ ‘डक्ट्रिन’ बनाइदिएका छन् । यिनै नेताले सम्पत्तिमा प्रतिफल (रिटर्न अन एसेट) भनेको ‘कुल नाफालाई कुल सम्पत्तिले भाग गर्ने’ भनेर अर्को डक्ट्रिन पनि शुरू गरेका छन् । अनि बूक क्लोज सम्बन्धमा ‘बूक क्लोज मिति नगद लाभांश, बोनस शेयर र हकप्रद शेयर वितरणका लागि मात्र नभएर साधारणसभा प्रयोजनका लागि पनि तोकेको हुन सक्छ’ भनेर अर्को डक्ट्रिन पनि बनाएका छन् ।
जायजेथा बेचेर शेयर
राजनीतिमा झैं शेयरबजारमा पनि थरीथरीका नेता छन् । घरको हाँडाभाँडा, दोपाया–चौपाया र गरगहना लगायत सम्पूर्ण जायजेथा केही बाँकी नराखी बेचेर शेयर किन्नुपर्छ र बोनस राइट खानुपर्छ भन्न पनि पछि परेका छैनन् । शेयरमा लगानी गरेपछि सुतेर खान पाइने भन्दै प्रत्येक नागरिक दोस्रो बजारमा आएर शेयर किन्नैपर्छ भन्ने पनि कम छैनन् । तर, सुतेर खान पाइने शेयरमा लगानी गरेका शेयर नेताहरू दिन(दिनै दलीय नेताको दैलोमा भाउ बढाइदेऊ भन्दै रोइकराई पनि गरिरहेका छन् । अरूलाई सुतेर खान पुग्ने क्षेत्रमा ल्याउन लागेको नेताहरू सुतेर खान छोडेर किन भाउ बढाइदेऊ भन्दै दैलो(दैलो पुगेका होलान् छक्कलाग्दो छ ।
पहिले ठीक कि अहिले
थरि–थरिका नेताको सूचीमा अर्का एकजना शेयर नेताको चर्चा गर्नैपर्छ, यी नेताले केन्द्रीय बैङ्कले पूँजी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेपछि विभिन्न बुँदा उल्लेख गर्दै शेयरबजारको गोल्डेन एरा (स्वर्णकाल) शुरू भएको भन्दै केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरलाई अहिलेसम्मका ‘डाइनामिक’ को उपमा दिएका थिए । अहिले यिनै नेता गभर्नरलाई सत्तोसराप गर्दै पूँजी वृद्धिको योजना ल्याएर राइटको भारी बोकाएर शेयरबजार बिगारेको आरोप लगाउँदै छन् । अब यी नेताले पहिला लेखेको तथा बोलेको र अहिले बोलेको मध्ये कुन गलत हो उनले स्पष्ट पार्लान् कि नपार्लान् ? पूँजी वृद्धि गर्न कम्पनीले उपलब्ध सबै वित्तीय उपकरण चलाउन सक्छन् र शेयरधनी त्यसमा सामेल हुने वा नहुने निर्णय गर्न पनि स्वतन्त्र छन् भन्ने यी नेतालाई ज्ञान नभएको हो त ?
वैकल्पिक लगानी किन
शेयरबजारप्रति नकारात्मक भनेर आरोप लागेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा हेज फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी जस्ता वैकल्पिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरे । त्यसै अनुसार धितोपत्र बोर्डले मस्यौदा गरेको वैकल्पिक लगानी कोष नियमावलीका बारेमा एक शेयर नेताले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष हुँदाहुँदै किन वैकल्पिक लगानी कोष ल्याएको भन्ने हाँस उठ्दो टिप्पणी गरेका छन् । संसारबाट लगभग विलीन भइसकेको मार्केट मेकर बन्न सकिन्न भनेर नागरिक लगानी कोषले धेरै पहिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, शेयर नेतालाई पत्तै छैन । आफ्नो पूँजी नभएको कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारीले तलब काटेर बचत गरेको रकम संस्थापक शेयर बाहेक जोखीमयुक्त असुरक्षित शेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सिद्धान्ततः मिल्दैन भन्ने चेतना यी नेतालाई कहिले आउने होला ?
९ सय कि २५ सय
एकजना व्यक्तिले विगत केही समयदेखि इण्डेक्स ९ सयमा आउँछ भनेर शेयरबजार प्रदूषित पारिरहेका बेला एक शेयर नेताले आगामी वर्ष २५ सय पुग्ने अर्को ‘राजकीय घोषणा’ गरिदिएका छन् । यी दुई जनाको कुरा सुन्दा इण्डेक्स भन्ने चिज यिनकै गोजीमा रहेको र जतिबेला मन लाग्यो मिटरझैं घुमाएर फुत्त देखाउने हो कि जस्तो देखिएको छ । शेयर बजारको इण्डेक्स कति पुग्छ वा कति घट्छ भन्ने कुरा कहिले पनि अनुमान गर्न सकिन्न । कम्पनीले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेमा शेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा इण्डेक्समा पनि गिरावट आउँछ भने कम्पनीले गुणात्मक प्रगति गरेमा शेयर मूल्य बढ्दा इण्डेक्समा बढोत्तरी आउँछ । इण्डेक्स गणना कसरी हुन्छ, इण्डेक्सलाई कुन तत्त्वले प्रभाव पार्छ जस्ता कुरा बुझ्दै नबुझी इण्डेक्स यति पुग्छ र यतिमा घट्छ भन्नु बेकारको कुरा हो । हुन त नेपालको शेयरबजारमा अनौठो गतिविधिको कमी छैन । धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारण शेयर धारण गरेकालाई जबर्जस्ती संस्थापक बनाउने हकप्रद दर्ता गराएको छ । एकताका एउटा वाणिज्य बैङ्कका अध्यक्ष आफ्नो बैङ्कको शेयर मूल्य बढाई दिन अनुनय गर्दै नेप्से पुगेको चर्चा चेलेको थियो ।
शेयर र शेयरबजारका बारेमा तालीम चलाउने प्रशिक्षक पनि शेयर नेता भन्दा केही कुरामा कम नभएको देख्दा यी दुईबीचको ‘नेक्सस’ बेजोड देखिन्छ । यस्ता प्रशिक्षक वासलात अध्ययन गर्न सिकाउने भन्छन् । तर, वासलातमा हुने शीर्षकको अनुसूची कहाँ हुन्छ थाहा पाउँदैनन् । ‘प्रिमियम’ र ‘स्वाप’ बाट प्राप्त भएको रकमलाई फ्री रिजर्भ (स्वतन्त्र जगेडा) भन्दै स्वतन्त्र जगेडा वा सञ्चित मुनाफा कहाँ हुन्छ र कसरी सृजना हुन्छ समेत थाहा पाएका छैनन् । अझ सञ्चित घाटाका बारेमा त जान्दै जान्दैनन् । वासलातको अभिन्न अङ्ग नाफा(नोक्सान हिसाब र नाफा(नोक्सान बाँडफाँट हिसाब सम्बन्धी विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा कहाँ हुन्छ थाहै पाएका छैनन् । शेयर र शेयरबजारको प्रशिक्षणमा यसको अन्तर्वस्तुमा प्रवेशै नगरी शुरूको अनुच्छेदको पहिलो वाक्यमा शेयर नेताले बोलेकै शब्द बोलेर प्रशिक्षण सक्छन् ।
शेयर नेताको चर्चापछि शेयर बजारका बारेमा लेख्ने विभिन्न नामधारी अनलाइनको चर्चा गरौं । दोस्रो अनुच्छेदको अन्तिममा भएको वाक्यांशको जस्तै ‘बोनसका लागि बूक क्लोज हुँदै छ’ भन्ने समाचार लेख्ने असङ्ख्य अनलाइन अग्रपङ्क्तिमा छन् । यिनले कहिले पनि साधारणसभाका लागि बूक क्लोज हुँदै छ भन्ने लेख्न जानेनन् । बूक क्लोज साधारणसभाका लागि भएको हो र बोनस साधारणसभाको एउटा प्रस्ताव मात्र हो भन्ने कहिल्यै बुझेनन् । हकप्रद शेयर जारी गर्न गरिएको बूक क्लोजलाई चाहिँ हकप्रदका लागि भन्न मिल्छ ।
नेपालमा पनि आफ्नो नामको फेसबूक पृष्ठ र ब्लगमार्फत भ्रामक कुराको प्रचार राम्रैसँग भएको देख्न सकिन्छ । बहकाउने र गलत तरीकाले बजारलाई प्रभाव पारेको आरोपमा बङ्गलादेशको क्यापिटल मार्केट ट्राइबुनलले महबुब सरवर नामक एक व्यक्तिलाई २ वर्ष तथा विक्ली इण्डष्ट्रीका सम्पादक इनायत करिमलाई ३ वर्षको जेलसजाय सुनाएको प्रसङ्ग यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ ।
अन्त्यमा हाम्रै केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरको नेता शैलीमा ‘भोलिको दिनमा बजार बढ्छ, बढ्नैपर्छ, अब बजार बढ्छ बढ्छ, नबढी धरै छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति आउनु खेदजनक हो । गभर्नरले शेयरबजार हेर्ने होइन, बैङ्किङ र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।
२०७५, २० आश्विन, 11:31:39 PM
शेयर बजारमा बाइस अङ्कको वृद्धि
शेयर बजारमा सुधार आउँदा बोटलर्स नेपालमा पहिरो
निजी क्षेत्रविरुद्ध अर्थमन्त्रीको अर्को आक्रमण, कोइरालामाथि कुदृष्टि
अमेरिकामा एक महिनामै तीन लाख १२ हजार नयाँ रोजगारी सृजना